Wargeeyska Geedi waxa uu ka kooban yahay koox yar oo dad ah, oo ka howlgala Netherlands, Belgium, Somalia iyo England. Xarunta Geedi waxa ay ku taalaa Tilburg ee wadanka Holland. Taas oo ah meesha asaaska wargeyska Geedi ay ka bilaabantay qorshihiisa. Wuxuuna ku salaysan yahay waayo-aragnimadii hore ee laga helay Wargeyska Hayaan, wakhtigaas oo la xidhiidha xilligii ay jirtay Hayadda Gowraar ee Samafalka ah. Wargeeyska Hayaan wuxuu socday intii u dhexeeyay 2001 ilaa 2006. Shaqaalaha Geedi waa Soomaali iyo Hollandees waana mutadawiciin, mid walbana wuxuu leeyahay waajibaad iyo howlo loo igmaday.
Ka hor intii aan la bilaabin Geedi, waxaa wadatashi lala yeeshay ururo kala duwan oo dalka iyo dibaddaba jooga.Taasi waxay keentay laba qodob oo bilow ah.Tan hore oo ah in wargeeyska Geedi uu yahay mid ka madax bannaan! gabi ahaanba ururada iyo hayadaha kale, kumana xirna urur kale oo (Somali ama ajnabi ah )! qodobka labaad: Geedi waxaa loogu talagalay dadka aan aqoon Somalia iyo Soomaalidaba ee ah Bulshada aan Soomaalida ahayn! Hase yeeshee, Geedi waxaa sidoo kale lagu wacyigaliyaa Somalida ku nool gudaha iyo dibadda. Tani waxay si cad u qeexday dad badan oo Soomaali ah ama ajinabi ah in ay wax badan ka ogaadaan arimaha iyo xaaladaha Somalia iyo Soomalida.
Warsidaha Geedi waxaa lagu soo saarey iyada oo aan lahayn wax kaalmo dhaqaale qorsheysan oo ay hayadaha siiyaan.Tani waxay mar kale xoojisay madaxbannaanida iyo faragalin laanta hayadaha dowliga ah ee wargeyska. Waxaa mararka qaarkood laga helaa tabarucaad maaliyadeed shakhsiyaad Somali ah si loo bixiyo kharajka daabacaada warsidaha Geedi.
De toekomst is niet wat er gaat gebeuren, maar wat wij er van maken.